Shiinaha Drum nooca toogashada warshad mashiinka qaraxa iyo saarayaasha | TAA
Faa'iidooyinka mashiinka qaraxa durbaanka durbaan
Tikniyoolajiyadda Qarax ee lagu kalsoon yahay: Drum mashiinada qaraxa toogtaywaxaa lagu soo saaray dhowr nooc oo kala duwan, noocyo iyo cabbirro ah. Iyagu waa is haysta oo kaliya waxay leeyihiin raad aad u yar. Si joogto ah ayaa loo ogaan karaa iyadoo la isku xiro dhowr mashiin.
Layout-friendly Layout:Dayactirka joogtada ahi wuxuu muhiim u yahay ilaalinta qiimaha muddada dheer ee qalabka. Adeegyada waaweyn iyo albaabbada kormeerka waxay si fudud u helaan dhammaan qaybaha muhiimka ah. Natiijo ahaan, qaybaha xirashada ayaa si fudud loo beddeli karaa.
Teknolojiyad Filter cusubNidaamka shaandhaynta casriga ahi wuxuu la dhacsan yahay waxqabadka sare. Muuqaal si gaar ah u xiiso badan ayaa ah gulufyada shaandhada shaagagga oo si dhaqso leh oo fudud looga beddeli karo mashiinka iyada oo loo mahadcelinayo isbadalkeeda farsamaysan. Nidaamyadan shaandhaynta ku shaqeeya ee ku saleysan kartoonnada ayaa dib loo habeyn karaa xitaa mashiinnada duqeynta duqoobay ee ku dhowaad dhammaan soo saarayaasha kale.
Naqshad adag Naqshad adag oo ka sameysan bir aad u adkeysi badan oo xirta oo leh dahaarka dheeriga ah ee meelaha loo soo bandhigo xirashada ayaa taageerta hawlwadeenka inuu ilaaliyo tiisa maalgashi.
* Tirada qaybaha xirashada si aad ah ayaa loo yareeyay (marka la barbardhigo mashiinnada qarxa toogashada birta-suunka) iyadoo ay ugu wacan tahay dabeecadda gaarka ah ee durbaanka.
* Dhaqdhaqaaqa jilicsan ee jilicsan iyo wareegga durbaanku wuxuu awood u siinayaa daaweynta jilicsan ee qaybaha.
* Naqshadaynta durbaanku waxay kuxirantahay qaybaha la daaweynayo.
Qaabka iyo naqshadeynta aagga hoose iyo darbiyada dhinacyada ayaa xaqiijinaya isku-dhicidda ugu wanaagsan ee qaybaha.
* Daloolinta durbaanka waxaa lagu xaqiiqsaday iyadoo la waafajinayo shuruudaha gaarka ah ee c ee ku saabsan qaybaha iyo xoqan. Tani waxay ka hortageysaa jahawareerka, iyo xoqidda ayaa sifiican looga bixi karaa.
* Mashiinnada qarxinta durbaanka waxaa loo adeegsadaa daaweynta qaybo yaryar oo wax soo saar badan.
Drum mashiinada qaraxa toogtay waxaa lagu heli karaa cabirrada soo socda ee soo socda:
Sooc farsamo TS 0050 TS 0150 TS 0300 TS 0500
Mugga Drum (1)
Marawaxadaha waxqabadka sare leh (tiro)
Marawaxadaha waxqabadka sare leh (kW)
7.5 ilaa 15 ilaa 22 ilaa 30
Gaarsiinta xaaqid fur fur fur fur
Mashruuca dayactirka la'aan haa haa haa
Qaybta shaandhada kaydadka PF4-06 PF4-06 PF4-09 PF4-12
Dheeraad kale iyo astaamo ayaa suurtagal ah.
Hore: Shaagagga shiidi FW-09 taxane
Xiga: Kaarboonka silig jarista siligga
mashiinka qarxa Nooca Drum
Shiinaha toogtay engeeg Machine
Drum mashiinka engeeg toogtay
Gudaha Mashiinada Qaraxyada Drum
Faa'iidooyinka Muhiimka ah Teknolojiyada qarxinta ee AGTOS: Marawaxadahayagu waa cutubyo awood oo xoog badan kuwaas oo si qaali ah waxtar u leh sababo la xiriira qaybo ka mid ah dharka oo aad u yar iyo kuwo aad u sarreeya oo loo yaqaan 'flfl ow'. Fududahay in la ilaaliyo Tiknoolajiyadda shaandhaynta cusub ayaa ku qancisa waxqabadyo adag. Aaladda otomaatiga ah ee gogosha loo yaqaan 'flfl ame googo' oo dambiil ku dhex jira ...
La heli karo qalabka dayactirka ah Content of Cr-12%, 20%, 25% ama codsi ahaan. Qaababka Wax soosaarka Hormarinta iyo saxsanaanta cilmiga sayniska iyo farsamada. Oolnimada sare iyo si toos ah line-soo-saarka qalajinta saldhig kaliya. Qalabaynta chromium-ka ee khaaska ah ee birta ah, oo ka dhigaysa farqiga u dhexeeya warshadaha gudaha. Qeybaha Asalka ah ee Soosaaray (OEM) waa la heli karaa. Waxaan sidoo kale bixinnaa ...
Gawaarida qarxa ee waxqabadka sare ee TAA waxay isku caddeeyeen suuqa inay yihiin kuwo xoogan, dhaqaale hufan oo dayactir leh. Waxaa lagu heli karaa iyada oo leh balaastiro giraangiraha marawaxadaha iyo noocyo kala duwan oo ah alaabooyin dayactir iyo xirasho (tusaale, bir adag). TAA giraangiraha qarxa waxqabadka sare ayaa caan ku ah casriyeynta mashiinada toogashada caadiga ah sidoo kale. Noocyada Wax soo Saarka Hagaajinta xawaaraha qarxinta toogashada sida iska cad caabbinta wanaagsan Yaraynta isticmaalka tamarta ...
Faa'iidooyinka Mashiinka Qarxa toogashada ee Raad-raacista ah * Teknolojiyadda qarxinta lagu kalsoon yahay: Cutubkeenna marawaxadaha waxqabadka sare aad ayaa loogu kalsoon yahay. Waxay yihiin kuwo sifiican waxtar u leh sababo laxiriira tirada yar ee xirashada qeybaha, naqshadeynta dayactirka-saaxiibtinimo iyo heerka qulqulka qulqulka badan. * Dayactir hoose: Dayactirka joogtada ah wuxuu caawiyaa joogteynta qiimaha mishiinada. Albaabada waaweyn ee dayactirka waxay si fudud u helaan dhammaan waxyaabaha muhiimka ah waxayna fududeeyaan beddelka degdegga ah ...
Faa'iidooyinka AGTOS mashiinada qarxinta suunka caagga ah ee caag ah Teknolojiyada qarxinta lagu kalsoonaan karo Tiknoolajiyada shaandhaynta ee casriga ah Noocyo fara badan oo kala duwan Aaladda oo loo maro iswaafajinta nidaamka gaadiidka gudaha. Marawaxadaha waxqabadka sare ee AGTOS: Marawaxadahayagu waa qaybo adag oo si fiican loo dhisay oo mashiinno ah. Tiro yar oo ka mid ah qaybaha xirashada iyo wax soo saar badan oo abrasive ah, ayay ugu shaqeeyaan si dhaqaale ahaan aad u badan. Qaar badan oo d ...
Sida caadiga ah, mashiinnada qarxa ee nooca hang-ga ah waxaa loo soo bandhigaa dufcaddii ama sii wadida howsha. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira naqshado badan oo dhexdhexaad ah oo ku wajahan noocyada kala duwan ee nidaamyada gawaarida kor. Xaalado badan, habab kala duwan sida qarxinta, rinjiyeynta iyo qalajinta xigta ayaa isku xirmi kara iyada oo loo marayo nidaamka gudbiyaha dusha sare. Tani waxay suurtogal ka dhigeysaa in la tuuro awood aad u weyn oo lagu hagaajinayo habsami u socodka shaqada. Noocyo dheeri ah oo lagu shaqeynayo ...